ပုံ (၁) လူမျောက်မိသားစု
ကုန်းဘောင်မင်းများ လက်ထက်မှာ ရုံးကြီး ငါးရပ်ဆိုတာ ရှိလေငဲ့ ၊ ထိုငါးမျိုးသော ရုံးတို့တွင် တစ်ခု အပါဝင်ဖြစ်သော ရွှေတိုက်ဟူဘိကား၊ မင်းများ၏ အသုံးဆောင်တော်များ အပြင် ရတနာ ပစ္စည်းများ၊ အလောင်းမင်းတရားကြီး လက်ထက်မှစတင်ပြီး မင်းတုန်းမင်းကြီးတိုင်အောင် ကုန်းဘောင်ဆက် မင်းများ၏ ၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် ထပ်တူရွှေသားဖြင့် သွန်းလောင်းပြုလုပ်ထားသော ရွှေကိုယ်လေးများကို ထားရှိပါတယ်။
ထို့ပြင် မင်းအဆက်ဆက် တွင် အစိုးရရာ နိုင်ငံတော် အရပ်ရပ်မှ၊ တင်သွင်းဆက်သလာသော ပစ္စည်းပစ္စယများ ၊ မင်းခမ်းတော်များ၊ ရတနာများ၊ အသုံး ဆောင်တော်များကို ပန်းချီဖြင့် ရေးသား မှတ်တမ်းပြုစုထားသော နန်းတွင်းပရပိုဒ်ဖြူ ကိုလည်း ရွှေတိုက်မှာပင် ထားရှိပါတယ်။
ထိုပုရပိုဒ်ဖြူသည်၊ ဆေးရေးပန်းချီစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ရွှေနန်းစဉ် လက်သုံးပုံတော် ပုရပိုဒ်ဖြူ ဟူ၍ လူသိများပါတယ်၊ နန်းတွင်းပုရပိုဒ်ဖြူဟူသည်၊ မင်းတပါးအသစ် နန်းတတ်တော်မူတိုင်း အသည်ဝန် ခန့်ထားတော်မူပြီး၊ ထိုအသည်ဝန်ကို တာဝန်ပေးအပ်ခါ ထိုမင်းလက်ထက်တော် တွင် အပြည်ပြည် အခန်းခန်း မှဆက်သလာရာ ပစ္စည်းပစ္စယများ အသုံးဆောင်တော်များ၊ ရတနာများ၊ အံဖွယ်ရာ ၊ ဆင်၊ မြင်း၊ လူ၊ စသော ဆက်သလာသော ပစ္စည်းများကို ဆေးရေးပန်းချီဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပန်းချီမှတ်တမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နန်းတွင်းပုရပိုဒ်ဖြူကို အလောင်းမင်းတရားကြီး လက်ထက်တော်မှ စတင်ရေးသားလာပြီး၊ ကုန်းဘောင်ဆက်၏ နောက်ဆုံး မင်းဆက်ဖြစ်သော သီပေါဘု ရင်မင်းတရားကြီးလက် ထက်တော်ထိ ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားသော မှတ်တမ်းစာအုပ်ဖြစ် သည်။
ထိုနန်းတွင်းပုရပိုဒ်ဖြူကို နောက်ဆုံးရေးသားမှတ်တမ်း တင်ခဲ့သော သူမှာ သီပေါမင်းတရား ကြီးလက်ထက် အသည်ဝန် တိုင်တားမြို့စားမင်း မင်းကြီးမဟာသီဟသူရဖြစ်ပါသည်။ ထိုနန်းတွင်း ပုရပိုဒ်ဖြူ တနေရာတွင် သက္ကရာဇ်(၁၁၈၃) ခုနှစ် ရတနာပူရ နန်းတည် ဘကြီးတော်ဘုရား လက်ထက် ဟံသာဝတီမြို့ဝန်မှ လူမျောက် ငရွှေမောင်ကို လာရောက်ဆက်သဟု ပုံနှင့်တကွ ရေး သားမှတ်တမ်းပြု စုထားပါတယ်။
ထိုရွှေတိုက်တွင် ထားရှိသော နန်းတွင်းပုရပိုဒ်ဖြူ၏ အဆိုအရ ၊ လူမျောက်ငရွှေမောင်သည်၊ လာရောက်ဆက်သစဉ် လွန်စွာအသက်ငယ်သေးပြီး၊ မျက်နှာတခုလုံးတွင်၊ အမွှေးအမှင်များဖုံးအုပ် နေပြီး၊ ထိုအမွေးအမျှင်များသည် အညိုရောင်အဆင်းရှိပြီး၊ ပိုးသားကဲ့သို့ အလွန်နူးညံ့ပြီး အရှည် တမိုက်ခန့်ထိ ရှိသည်ဟု ရေးသားထားပါတယ်။
ထိုမင်းလက်ထက် မြန်မာနှစ် (၁၁၈၈)ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၉)ရက်နေ့တွင်၊ ဂျွန်က ရောဖို့ ဦးဆောင်သော အင်္ဂလိပ်သံအဖွဲ့သည် အမရပူရမြို့တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ထိုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သော ကပ္ပတိန်ယူးလ်၏ အစီအရင်ခံစာတွင် လူမျှောက်ငရွှေမောင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရပုံကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ယူးလ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် လူမျောက်ငရွှေမောင် အကြောင်းကို ဤကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင်ထား ပါတယ်၊ လူမျောက် ငရွှေမောင်သည် ရှေ့သွားအနည်းငယ်သာ ရှိပြီး အံသွားလုံးဝ မရှိပေ၊ သို့ရာတွင် အလွန်မာကျောသော အရာဝတ္ထုများကို ကောင်းစွာဝါး စားနိုင်သည်၊ အသားလုံးဝ မစားပေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွတ်နှင့်၊ ပဲ သစ်သီးသစ်ဖုများသာ စားသည်။
ထူးခြားချက်မှာ မောင်ရွှေမောင်၏ မိဘများသည် သာမန်လူသားများပင်ဖြစ်သည်၊ မောင်ရွှေမောင် တစ်ဦးတည်းသာ အမွှေးအမျှင်များ ဖုံးအုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်၊ မောင်ရွှေမောင်သည် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သမီးတစ်ဦးရှိသည်၊ ဖခင်မောင်ရွှေမောင်ကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်လုံး အမွှေး မမျှင်များ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်၊ အမည်မှာ မယ်ဖုံးဟုခေါ်သည်ဟု ရေးသားမှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း လူမျှောက်ငရွှေမောင် အကြောင်းကို သိမှီခဲ့သူ မြင်းမှူးမင်းသားကြီး ဦးမောင်မောင် တင်က ပြည်ဦးလွင်စံအိမ်တော်တွင် နေထိုင်ခိုက် ၊ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဒီဒုတ်ဦးဘချိုနှင့် အဘိုးကို `မယ်ဖုံးဟာ သာမန်အရပ်သား တစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်တယ်၊ မောင်ဘိုးဆင်လို့ ခေါ် တဲ့သားတစ်ယောက်ရတယ်၊ ၁၄နှစ်သားအရွယ် မောင်ဘိုးဆင်ကလည်း သူ့အဘိုးဖြစ်သူ ဦးရွှေမောင်နှင့် အမေဖြစ်သူမယ်ဖုံးကဲ့သို့၊ တစ်ကိုယ်လုံးအမွှေးအမျှင် များရှိတယ်ဗျား´ ဟုပြောဖူး ခဲ့ကြောင်း ၊ မှတ်စုအောက်ခြေမှာ ရေးသားထားတာကို ဖတ်မှတ်မှိပါတယ်။
(လူမျောက်ငရွှေမောင်ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဒါဝင်သာ သိခဲ့ရင် မြန်မာပြည်များ ရောက်လာ လောက်တယ်လို့တောင် တွေးမှိသေးတယ်၊ လူမျောက် ငရွှေမောင်ရဲ့သမီး မယ်ဖုံးရဲ့ပုံကတော့ ရှိပါတယ်၊ အရင်တုန်းက ဒီဘလော့ရဲ့ ညာဖက် မှာ တင်ထားတယ်၊ ခေတ်စနစ်တွေကြောင့် မျက်မှန်တပ်ထားရတယ်၊ မျောက်ပေမဲ့၊ ခေတ်သိပ်မှီတယ်၊ စကပ်နဲ့ ဘောင်းဘီရှည်သာ ၀တ်တယ် မဒမ်ငွေကိုပြောတာ မဟုတ်ရပါဘူး၊ ကိုကိုငွေ ချစ်သူကိုပြောတာပါ။)
ဘလော့စာရှု့သူများ ဗဟုသုတ ကုံလုံကြွယ်ဝပါစေကြောင်း ငွေလမင်းတို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေခင်မျာ။
လူ့မျောက်မိသားစု အတွက် ပုံလေးတွေ ရှာရင်း တွေ့ရှိလာတဲ့ သူတို့မိသားစုအကြောင်းလေးတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အချက်အလက်မတူတာများရှိရင်နားလည်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် လူမျောက် အကြောင်းကို လူထုဒေါ်အမာ၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ဦးစိန်မောင်ဦး၊ မြကေတု၊မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)အစရှိတဲ့စာရေးဆရာများကပုံစံအမျိုးမျိုးရေးခဲ့ကြပါတယ၊်ဒဂုန်ခင်ခင်လေးကစာဆိုတော်ဝတ္ထုကြီးထဲမှာ၊ လူထုဒေါ်အမာက ဈေးကောက်လူမျောက် ဆောင်းပါး၊ ဦးစိန်မောင်ဦးကလူမျောက်မိသားစုနှင့် သိပံ္ပပညာ အမြင်၊ မြကေတုက လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်နှင့်သမီးမယ်ဖုံ၊ မောင်သန်းဆွေက ကုန်းဘောင်ခေတ်က လူမျောက်ရှင်းတမ်း စတဲ့နာမည်တွေနဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ (၂) ဦးရွှေမောင်
ရွှေမောင်ဟာအဲဒီကတည်းကနန်းတွင်းမှာပျော်တော်ဆက်အဖြစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။မျောက်တွေလိုကပြဖျော်ဖြေရပါသတဲ့။သူ့မိဘတွေမှာရောသူတို့မျိုးနွယ်စုထဲမှာပါသူ့လို အမွှေးအမျှင်တွေမရှိဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။ လူပျိုအဖြစ်ကို အသက်၂၀အရွယ်မှရောက်ပါတယ်တဲ့။ အသက်၂၂မှာတော့ဘုရင်က(ဘကြီးတော်ဘုရား)သူ့ကိုလှတဲ့နန်းတွင်းသူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးပါတယ်။သူတို့ကလေး လေးယောက်ရခဲ့တယ်။ အားလုံးကမိန်းခလေးတွေချည်းပါပဲ။
နှစ်ယောက်ကတော့ယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီးတတိယသမီးလေးကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တော်တော့်ကို တူပါသတဲ့။ နောက်ဆုံး ၂နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်ကတော့သူ့လိုပဲ အမွှေးအမျှင်တွေနဲ့ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ အငယ်ဆုံး သမီးက ရွှေမောင်ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံတဲ့ မဖုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(၃) ကိုရွှေမောင်တို့ အကြောင်းကို ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူ John Crawfurd
ပုံ (၄) မဖုံး
အဲဒီနောက် ၁၈၅၅မှာ အင်းဝကို ဟင်နရီယူး(လ်) ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကိုရွှေမောင့်သမီး မဖုံးဟာ အသက် ၃၁အရွယ် ရှိနေပါပြီ။သူ့ကို အီတလီလူမျိုး တစ်ယောက်က လက်ထပ်ပြီး နိုင်ငံခြားကိုခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်သီပေါမင်းကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ မဖုံးကိုဘုရင်ကပဲသာမန်အရပ်သားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုရပါမယ်။ဦးရွှေမောင်ကတော့လူဆိုးဓားပြတွေသတ်ဖြတ်လို့ကွယ်လွန်ပြီးခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။မဖုံးဟာလည်းသူ့အဖေဦးရွှေမောင်လိုပဲတစ်ကိုယ်လုံးကိုအမွှေရှည်တွေနဲ့ဖုံးလို့နေပါတယ်။မဖုံးကနေ သားသမီး သုံးယောက် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အဲဒီအထဲက မောင်ဖိုးဆက်နဲ့မမိတို့ဟာမဖုံးလိုပဲ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အမွှေးတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံ(၅) ၁၈၅၅မှာ မဖုံးအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သူ Sir Henry Yule
သူတို့မိသားစုဟာ သူတို့ကို အထူးအဆန်း လာကြည့်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဆီကနေ အခကြေးငွေကိုကောက်ခံပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပြုခဲ့တယ်။သူတို့ဟာကြည့်ရှုသူတစ်ယောက်ချင်းစီကနေရူပီးငွေလေးဆယ်ယူတယ်လို့သိရပါတယ်။နာမည်ကြီးဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘာနမ်ဟာ ၁၈၇၁ ခုနှစ် ကတည်းကသူတို့ကိုအမေရိကန်ခေါ်ပြီး သူရဲ့ (Greatest Show On Earth) ဆိုတဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲကြီးမှပြစားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်က ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။
၁၈၈၅မှာတော့ သီပေါမင်းနန်းကျပြီး နန်းတွင်းရေးတွေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ မဖုံးတို့ မိသားစုဟာနေပြည်တော်ကနေတောတွင်းတစ်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။မောင်ဖိုးဆက်ဟာမျက်စိမကောင်းတော့တဲ့မိခင်မဖုံးကိုကျောမှာပိုးပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောထဲမှာ သူတို့ ဒုက္ခရောက်နေစဉ်မှာပဲ သီပေါမင်းထံမှာ အမှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့အီတလီလူမျိုး အရာရှိ ကပတ်တိန် ပေပာနိုက (Captain Paperno) သူတို့ကိုရှာတွေ့ပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ကို ဥပရောကို ပို့ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၆ဇွန်လထဲမှာမမိ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အသက် ၂၃နှစ် အရွယ်လောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။၁၈၈၆နွေရာသီမှာတော့ သူတို့ကို လန်ဒန်မြို့ပီကာဒလီ လမ်းပေါ်က Egyptian Hall မှာပြန်လည်တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ပုံ(၆)မဖုံး (၃၁နှစ်) နှင့် မောင်ဖိုးဆက် (၁၄လသားအရွယ်)
ပုံ(၈) မဖုံးတို့ကို အမေရိကားမှာ ပြစားခဲ့သည့် Phineas Taylor Barnum
(July5, 1810 – April 7, 1891)
၁၈၈၆ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ မဖုံးနဲ့ မောင်ဖိုးဆက်တို့ အင်္ဂလန်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မဖုံး အသက်က ၆၂ နှစ်လောက် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မျက်စိလည်းကွယ်နေပါပြီ။ ဘာနမ်လည်း သူတို့ရှိရာ အင်္ဂလန်ကို လိုက်လာပါတယ်။ သူ့အကြံကအမေရိကားမှာ စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ ပွဲထဲမှာ မဖုံးတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ကိုပြသဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ထက်အရင် လာပြီး စည်းရုံးနေတဲ့ အခြားသောပွဲစီစဉ်နေသူတွေလည်း အဲဒီကို ကြိုရောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာနမ်ဟာ အခြားသူတွေပေးတဲ့ဈေးထက် အများကြီးပိုပေးပြီး (ယခုခေတ် ဒေါ်လာ၂.၃သန်းလောက်ပေးရတယ်လို့ သိရပါတယ်) သူတို့မိသားစုကို ၁နှစ် စာချုပ်နဲ့ သူ့ဆီမှာ ပြသဖို့သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မဖုံးနဲ့ သားဖြစ်သူ တို့ဟာ ၁၈၈၇ မှာလန်ဒန်ကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကနာမည်ကျော်FoliesBergereကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ဟာဘာနမ်နဲ့သဘောတူညီချက်အရ အမေရိကန်က ဘာနမ်ရဲ့ဆပ်ကပ်ပွဲတွေမှာလိုက်ပါဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်။
စာချုပ်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီကာလ ၁၈၈၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ မဖုံးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ ၁၈၅၅ ကပါတ်တိန် ဟနရီယူး(လ်) လာတုန်းကသူမအသက်က ၃၁နှစ် ဆိုခဲ့တော့ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက်၆၄နှစ်လို့ မှတ်ယူရပါတယ်။ သူ့ဈာပနကို ဝါရှင်တန်ဒီစီ သင်္ချုင်းမှာပဲ မြန်မာထုံးတမ်းစဉ်လာ အတိုင်း သဂြိုဟ် ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မဖုံး ကွယ်လွန်သွားပေမယ့် မောင်ဖိုးဆက်ဟာ သူ့မိန်းမနဲ့အတူ ဆက်ပြီး ပွဲတွေပြသခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သူ့မိန်းမဟာ တချိန်က နန်းတွင်းအပျိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ဖိုးဆက်ဟာ တစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးတွေဖုံးနေပေမယ့်ခါးကနေစပြီးဒူးအထိမင်ကြောင်အပြည့်ထိုးထားတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဉာဏ်ရည်လည်း မနိမ့်ကျသလိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တယ်လို့ J.J. Weir ဆိုသူကလည်း မှတ်တမ်း တင်ခဲ့တယ်။
မောင်ဖိုးဆက် အကြောင်း နောက်ဆုံး တွေ့ရတာက ၁၈၉၄ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ World's Columbian Dental Congress, Volume 1မှာပါ။ အဲဒီအထဲက ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ မောင်ဖိုးဆက်ကို ၁၈၉၁မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့သွားတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပွဲစီစဉ်သူတွေက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
Buchanan's Journal of Man, February 1887 Volume 1, Number 1 ထဲမှာမောင်ဖိုးဆက်မှာသားသမီးမရှိဘူးလို့ဆိုထားတာမို့အောက်ပါဓာတ်ပုံအရဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးငယ်ဟာမောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ညီမမယ်မိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အလယ်မှာရပ်နေတဲ့လူဟာမဖုံးရဲ့ယောက်ျား မောင်ဖိုးဆက်ရဲ့ အဖေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွက်ဆကြပါတယ်။မယ်မိကလည်းအသက်၂၆နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သားသမီးမရှိလောက်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့မောင်ဖိုးဆက်မှာသားသမီးမရှိဘူးဆိုတော့မျိုးဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ပုံ(၉) From Martin Monestier's Human Oddities.
ပုံ(၁၀) Maphoon, Moung-Phoset and Mah-Me. The original Goss photograph
from which the La Nature (1875) illustration was engraved
Posted by ငွေလမင်း at 1:41 AM
ရျားရျားပါးပါး ဗဟုသုတလေးတွေ တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါအကို.....
တစ်ခါမှတောင် မကြားဖူးဘူး ..
ခုလို ဗဟုသုတ ရှယ်တာ
ထူးထူးခြားခြား ဗဟုသုတတွေ မှတ်ယူသွားပါတယ်။ အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး မျှဝေပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
'လူမျောက်ငရွှေမောင်' ကိုကြားဖူးခဲ့ပေမယ့် အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိရသေးဘူး။
ဟုပ်တယ်။ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတယ်။ ပုံတွေလည်း မြင်ဘူးတယ်။ ဒါပေ့မဲ့ ခုရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပိုစုံတယ်။ ကျေးဇူးပဲ။ ခုယိုဒယားက ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကလည်း သူတို့ လိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ လက်ရှိက အိန္ဒိယမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ယိုဒယားက ကောင်မလေး နဲ့ ဘယ်နိုင်လဲ မသေချာဘူး(သြစတေးလျ လို့ ထင်တယ်) အဲဒီမှာ တစ်ယောက် ။ စုစုပေါင်း ၃-ယောက်ရှိတယ်လို့တီဗွီမှာလာတာ ကြည့်ဘူးတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာမှာပဲ ဖုံနေတာလို့ဆိုပါတယ်။
အင်း ထူးဆန်းလိုက်တာ။ ပြစားတာလည်း ခံရရှာတယ်။ ဒီမိသားစုရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကကော ဘယ်လိုတွေလဲဆိုတာကို သိချင်ပါသေးတယ်။
ရှားပါး ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးအထူး...
ရှားပါးဆောင်းပါးလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုငွေရေ့ တကယ်ပဲ အခုမှ သိတော့တာ ။
တကယ့်ကို အခုမှသိရတာ ဒါပေမယ့် သူများရဲ့ နိုင်ငံမှာ
အခုလို ပြစားခံရတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။
ငရွှေမောင့် ရင်သွေး မယ်ဖုံးလေး
မျက်မှတ် စကတ် အသာတပ်၍
သွားလာလှုပ်ရှား ငွေလမင်း အလား
ဖတ်တော့ဖတ်ဖူးပါတယ်၊ ခုလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖတ်ဖူးဘူး၊ စိတ်တော့မရှိပါနဲ့၊ အရင်ရေးတဲ့သူက အမွေးအမျှင်အများဆုံး လူသားလို့ရေးသွားပါတယ်၊ မျောက်လို့မရေးပါဘူး၊ အနောက်နိုင်ငံသား မှတ်တမ်းတွေထဲမှာ ရေးပေမဲ့ သူဟာသူပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊